जनगणना अन्तिम चरणमा : तपाईं छुट्नु त भएन ? | Safal Khabar
जनगणना अन्तिम चरणमा : तपाईं छुट्नु त भएन ?
विहीबार, ०९ मंसिर २०७८, ०७ : ५८
जाजरकोट । मेरो सहभागिता मेरो गणना भन्ने मुल नाराका साथ गत कार्तिक २५ गतेदेखि देशभर सुरु भएको जनगणना मंसिर ९ गते सकिंदै छ। जाजरकोटमा राष्ट्रिय जनगणनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार जाजरकोटमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी देखिएको छ।
जाजरकोटमा यसपटक करीव दुई लाखको हाराहारीमा जनसंख्या पुग्ने अनुमान गरिएको छ। २०६८ अनुसार जाजरकोटको कुल जनसंख्या एक लाख ७१ हजार तीन सय चार थियो। यसपटक एक लाख ९० हजारदेखि दुई लाख पुग्ने प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको जिल्ला जनगणना अधिकारी जनक बोहराले बताए। उनका अनुसार महिला ९४ हजार सात सय ७३ र पुरुष ९४ हजार पाँच सय ५० तथा अन्य लिङ्गी ७ जना रहेको र केही थपघट हुन सक्छ।
२०६८ मा महिला ८५ हजार ७ सय ६७ र पुरुष ८५ हजार ५ सय ३७ थिए। यस अघि महिलाको जनसंख्या बढी देखिएकोमा यस पटक पनि महिलाको संख्या केही बढी हुनेछ। ३० हजार चार सय ४२ घरधुरी रहेकोमा यस पटक ३३ हजार हाराहारीमा घर र ३७ हजार तीन सय परिवार हुने प्रक्षेपन गरिएको छ।
जाजरकोटमा कुल घरको संख्या भने करीव ४६ हजार रहेको छ। जिल्लामा ३७ हजार परिवार मध्य करीव ३३ हजार परिवार कृषि पेशामा आश्रित छन्। भाडामा बस्ने केही बाहेक सबैको विवरण गणकले संकलन गरिसकेको निर्वाचन अधिकारी बोहराको भनाइ छ। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।